China igwe anaghị agba nchara whiskey nkume mgbọ Reusable Chilling Stone Ice Cubes na osisi igbe Nsuputa na Suppliers | Shunstone
Nkume Wiski ahaziri iche
Igwe anaghị agba nchara chilling Ihe
Onyinye Crystal Glass
Wine Ngwa Onyinye Set
Nri Stone Set
Onye na -eme kọfị
Ihe mgbochi kọfị
Onyinye N'ihi The Wiski n'Anya
Onyinye N'ihi The Wine n'Anya
Onyinye N'ihi mmanya n'Anya
Onyinye N'ihi Host & Home
Onyinye maka onye hụrụ kọfị n'anya
Nkume igwe anaghị agba nchara whiskey mgbọ a na-emegharị emegharị n'ime igbe osisi
✔ whiskey anaghị edetụ ire dị ka nke a - Anyị Whiskey Bullet Sharped Stones Set bụ ebe a iji gbanwee ahụmịhe ị drinkingụ mmanya na-aba n'anya site n'ikwe ka ị nụ ụtọ ihe ọ drinkụ drinkụ oyi ice gị na-enweghị dilution na mgbanwe ụtọ ị ga-enweta site na iji ice.
✔ Tinye emetụ onwe gị na iko ọ bụla nke ọmarịcha bourbon - Nkume whiskey anyị na-ele anya dị ka mgbọ ga-agbakwunye ihe pụrụ iche na mmanya na-amasị gị, n'adịghị ka nkume sipping omenala.
✔Steel whiskey 304 igwe anaghị agba nchara - 304 igwe anaghị agba nchara n'ụzọ zuru oke na FDA, nkume whiskey anyị dị mma na-asa efere na n'ezie na ọ nweghị nchebe ịnọ na kọntaktị na whiskey, bourbon, scotch ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ.
✔ Onyinye zuru oke maka whiskey AFICIONADOS - Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọhụrụ na onyinye pụrụ iche maka nwoke ahụ pụrụ iche na ndụ gị, elela anya ọzọ. Mgbọ Whiskey Set site na Frolk gụnyere mgbọ igwe 6 na otu igbe friza dị adị, yana igbe onyinye kacha mma!
✔ Hụrụ ya n'anya ma ọ bụ ego gị azụghachi - Ọ naghị enwe obi ụtọ na Chillers Whiskey gị? Naanị kpọtụrụ anyị n'ime ụbọchị 90 nke ịzụrụ ihe, anyị ga-enye gị nkwụghachi zuru ezu, maka ihe ọ bụla. E kwuwerị, a na-ekpuchi nzụta gị n'okpuru nkwa afọ ojuju 100%. EGO azụ - Ọ bụghị kpamkpam na-atọ ụtọ na Whiskey Chiller gị.
Production & mbukota
Nkume whiskey igwe anaghị agba nchara, Ice Cubes metal
Akpụkpọ ice whiskey mere site na ọkwa nri 304 igwe anaghị agba nchara, na-arụ ọrụ iji belata okpomọkụ nke ihe ọṅụṅụ na-eme ka ha dị jụụ. Enwere ike ịmegharị ya, ma na-edobe oyi nke ihe ọṅụṅụ gị ruo ogologo oge na-etinyeghị ya. Iji nweta nsonaazụ achọrọ, naanị ịkwesịrị ijide ice cube nke nwere mgbọ n'okpuru mmiri na-agba ọsọ ka ha wee nwee ntakịrị mmiri mmiri ma debe ha na friza maka oge 1-2 awa. Atọ ma ọ bụ anọ nke nkume whiskey oyi kpọnwụrụ ka mma ka ejiri ya mee ihe maka ịṅụrị ọṅụ.
- Ọkwa nri, BPA n'efu, FDA kwadoro yana 100% Eco-enyi na enyi
- Nwee ihe oriri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, n'etiti etiti cube ọ bụla, na-enye ohere ogologo oge oyi na obere oge oyi (1-2 awa.)
- Reusable – Ga-adịru mgbe ebighị ebi
- Ọ dị mfe ihicha - nchekwa efere efere
- Ọ dị mfe ịchekwa - na-abịa na obere obere obere akpa eriri mara mma, nke nwere ike dabara na friza ọ bụla
- enweghị isi. , Adịghị ụtọ
- Ìhè arọ - Ihe dị ka otu ICE CUBE otu nha
- Lee ọmarịcha iko gị
- Enwere ike iji ya na ihe ọṅụṅụ ọ bụla - Jiri ha dị ka nkume scotch ma ọ bụ ICE CUBE, na biya gị, mmiri, protein na-ama jijiji, pop ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ
- Agafefela mmetọ ma ọ bụ na-ejigide ísì na ụtọ sitere na ihe ndị ọzọ gbara ha gburugburu
- Ọ dị mma karịa nkume whiskey soapstone nke dị arọ, enweghị ike iji ya na efere efere, a ga-ajụ oyi maka ihe dịka awa 4 tupu eji ya, nwere ike. gbawaa, gbajie ma ghara ịdị ka oyi ice cube
Aha ngwaahịa Nkume Whiskey igwe anaghị agba nchara
nha 36x29x22 mm
Agba ọlaọcha , ọla edo , rose gold , egwurugwu
ihe N'èzí bụ #304 igwe anaghị agba nchara. Mmiri dị n'ime nwere mmiri (74.8%), glycerol (23%) na ihe oriri ndị ọzọ na-edozi ahụ (2.2%).
Asambodo FDA & LFGB
Etiti oge 10-15 ụbọchị
ojiji: nkwalite, chilling ọṅụṅụ, onyinye
mbukota Igbe osisi, igbe ndọta, igbe CMYK ma ọ bụ igbe onyinye omenala ndị ọzọ
Previous: Ugogbe igwe igwe anaghị agba nchara Whiskey Decanter Slate Coasters setịpụrụ onyinye.
Next: Glass Lowball maka Scotch Bourbon Whiskey Rocks Igwe anaghị agba nchara Chilling Nkume Onyinye Maka ụmụ nwoke
The Item Arts & Crafts na-ewu ewu maka Bar, Home, Hotel, Ụlọ oriri na ọṅụṅụ & Company.
Ahaziri & Unique Onyinye Design
More na-eche gị ....
Anyị nwere dị iche iche na ngwugwu n'ihi na gị na-ahọrọ
Kasị ala price na OPP akpa, Cotton Velvet akpa ....
Economy price na Akwụkwọ igbe, Kraft Box, Osisi Box, ígwè igbe, ịkwanyere igbe ... ..,
Okomoko Design na akpụkpọ anụ igbe, osisi igbe, ike kaadị osisi igbe ... ..
Ọtụtụ ahaziri ngwugwu anyị na-anabata.
Ọtụtụ n'ime anyị Products na-gafere FDA, LFGB, OA na ca 65 asambodo, ha dị mma.
Ihe anyị na ụlọ mmepụta ihe na, anyị nwere SEDEX, BSCI, SGS asambodo.
Ukwuu n'ime anyị bụ afọ 10 nke Golden Member nke Alibaba, na ezi reviews.
2018 afọ June 20, anyị sonyeere nnukwu BV soplaya na Alibaba, n'okpuru bụ asambodo:
Ọkpụrụkpụ base Whiskey Glass Tọọ igwe anaghị agba nchara ...
Nkume Whiskey na Glass Tọọ Granite Whiskey Roc...
Nkume Whiskey Set nke 2 igwe anaghị agba nchara ice Bal ...
Nkume mmanya na-ekpo ọkụ na-ere whiskey Nkume Whiskey gbara ọkụ...
12 Shot Glass Party Server with rustic Wood Tra...
whiske iko granite ochie na-ere kacha mma...
Copyright - 2010-2019: All Rights echekwabara. Guide ,Hot Products ,Sitemap ,IGBOB Mobile
wine Glass , Pine Wooden Box, onyinye kacha mma maka ndị hụrụ mmanya n'anya, Slate ,